ICloud Private Relay iba isici se-beta ku-beta yakamuva ye-iOS 15 | Izindaba ze-IPhone
U-Angel Gonzalez | | iOS 15, Izaziso
I-Apple yethule eWWDC 2021 inqwaba yezinto ezintsha eziqoqwe ngaphansi ICloud +, okusha okusha efwini le-Apple. Ngaphakathi kwaleli qoqo lezinto ezintsha kukhona Ukudluliswa kwangasese kwe-iCloud, uhlelo olukwaziyo ukwengeza ubumfihlo lapho upheqa i-Inthanethi. Kuwo wonke ama-betas esoftware ashicilelwe yi-Big Apple, umsebenzi uvele wenziwe wasebenza ngokuzenzakalela futhi usebenza ngokugcwele. Noma kunjalo, U-Apple uthathe isinqumo sokwenza i-ICloud Private Relay ibe yi-beta yomphakathi ekhutshazwe ngokuzenzakalela kufayela le- I-iPadOS beta 7 ne-iOS 15.
1 ICloud Private Relay - indlela ephephile neyimfihlo yokuphequlula kusuka ku-iOS, MacOS, naku-iPadOS
2 IOS 15 izokhishwa ngalesi sici njenge-beta yomphakathi
ICloud Private Relay - indlela ephephile neyimfihlo yokuphequlula kusuka ku-iOS, MacOS, naku-iPadOS
ICloud Private Relay noma ICloud Private Relay service iyi- uhlelo que ivumela ithrafikhi eshiya ukuthi idivayisi yethu ibethelwe. Kufinyelela lokhu kubonga ukwakhiwa kwama-multi-hop lapho zonke izicelo eziphuma ku-iPhone noma i-iPad zithunyelwa kuma-relay amabili (ama-proxies). Ngenxa yalokhu kuzuba okubili, kuvunyelwe ukufihla i-IP ngqo lapho sisebenza khona. Kepha ukugcina ezinye izici eziyisisekelo zombuzo wethu njengendawo efanayo ukuqinisekisa ukuthi imisebenzi ethile yewebhu iyasebenza.
Umphumela uba ukuthi ikheli le-IP limelela indawo elandelwayo yomsebenzisi kepha ikheli le-IP langempela lifihliwe ngokwabelana ngekheli elingaziwa kumaseva wewebhusayithi. Futhi ngalokhu kutholakala indlela ephephile futhi eyimfihlo yokuphequlula. Ochwepheshe abaningi baqhathanise uhlelo ne-VPN. Kodwa-ke, nge-ICloud Private Relay asikwazi ukufinyelela nge-IP kusuka kwenye indawo. Futhi-ke, asikwazi ukufinyelela kokuqukethwe okungavinjelwa. Okutholwayo ukufihla i-IP ngemininingwane yendawo efana neyangempela, eyihlukanisa ne-VPN yakudala.
ICloud Private Relay iyinsizakalo ekuvumela ukuthi uxhume cishe kunoma iyiphi inethiwekhi bese upheqa i-inthanethi ngeSafari ngendlela ephephe kakhulu futhi eyimfihlo. Iqinisekisa ukuthi ithrafikhi ephuma kudivayisi yakho ibethelwe futhi isebenzisa ama-internet relays amabili azimele ukuze kungabikho muntu osebenzisa ikheli lakho le-IP, indawo okuyo nomsebenzi wakho wokuphequlula ukudala iphrofayili eningiliziwe ngawe.
IOS 15 izokhishwa ngalesi sici njenge-beta yomphakathi
Ukumangala kugxume ngokwethulwa kwe-beta yesikhombisa ye-iOS ne-iPadOS 15. Kuyo, ICloud Private Relay ikhutshazwe ngokuzenzakalela futhi nombhalo omusha obeka umsebenzi ngefomu le-beta. Okusho ukuthi, umsebenzi onjalo usuke ekubeni inketho enikwe amandla ngokuzenzakalela kumsebenzi okhutshazwe ngaphambili ngokuya kohlolo lwe-beta.
Lokhu kungenxa yokuthi abathuthukisi bathole izinkinga zokusebenza nokufinyelela kwamanye amawebhusayithi basebenzisa i-iCloud edluliselwe ngasese. Eqinisweni, lokhu kuchazwe embhalweni osemthethweni wezindaba ze-beta 7:
ICloud Private Relay izokhishwa njenge-beta yomphakathi ukuqoqa impendulo eyengeziwe futhi ithuthukise ukuhambisana kwewebhusayithi. (82150385)
Umphumela wokuphela kwalokhu kuhamba unesiphetho esijabulisa kakhulu kunomsebenzi we-SharePlay. Lo msebenzi wokugcina ngeke ukubone ukukhanya enguqulweni yokuqala yokugcina ye-iOS 15 kepha ngokunokwenzeka, kuzoba ku-iOS 15.1. Endabeni ye-ICloud Private Relay yebo izobona ukukhanya ku-iOS 15 njengenguqulo yokugcina, okungenani okwamanje, kepha ngophawu lokuthi kuseyisici esivivinywayo futhi singaphansi kwe-beta yomphakathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » ICloud Private Relay iba isici se-beta ku-beta yakamuva ye-iOS 15
IGoogle ingakhokha i-Apple $ 15.000 billion ukuze ihlale iyinjini yokusesha ezenzakalelayo